Qaraxyo ka kala dhacay Muqdisho iyo Afgooye
Wararka: Aug 16, 2007
Golaha Midnimada Beelaha Hawiye oo wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeray
C/llaahi Yuusuf oo u ambabaxay Magaalada Nayroobi
Xulka qaranka oo 18-ka Bishan kulan yeelan xulka Rwanda
Iyadoo weli ay sii xoogeysanayan qaraxyada lala beegsanyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda Federaalka ayaa shalay waxay qaraxyo ka kala dhaceen Muqdisho iyo Afgooye, haddii aan ku hor marno kii ka dhacay degmada AFgooye, waxa uu ka dhacay Suuqa Arriga ee degmadaasi, waxan qaraxaasi lala beegsady ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka oo halkaasi ku sugnaa, waxaan ku geeriyooday ilaa iyo labo qofood, hase yeeshee waxa uu qaraxaasi sababy dhaawac fara badn oo intooda badan loo soo qaady Magaalada Muqdisho.
Qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Warshadda Caanaha,a waxaan lala beegsaday gaari ay lahaayeen Ciidamada Dowladda, waxa uuna qaraasi keenay dhaawaca dhowr qofood, hase yeeshee raraas ay rideen ciidamada ayaa waxay waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah oo ka dhawaa halkii uu qaruxu ka dhacay, sidoo kale qarax aad looga maqlay Muqdisho qaybo ka tirsan ayaa isna waxa uu ka dhacay agagaarka Isbitaalka Carafaat, waxaan lala beegsaday Gaari kuwa Ciidamada ah oo la sheegay in ay ku dhinteen labo qofood, dhowr qofoodna ay ku dhaawacmeen iyadoo Gaarigaasi uu gebi ahaanba burburay.
Suuqa Bakaaraha ayaa isna k mid ahaa meelaha qaraxyada laga maqlay iyo waliba Kiilomitir Foor, waxayna qaraxyadaani keeneen in ay joogsadaan isku socodka gaadiidka iyo dadka.
Qaraxyo xalay laga maqlay qaybo ka tirsan Muqdisho
Waxaa Xalay deegaano ka tirsan Magaalada Muqdisho laga maqlay qarxyo iyo rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda, inkastoo aan la ogaan Karin goobaha rasmiga ah ee qaraxyadasi ka dhaceen, maadaama inta badan Magaalada Muqdisho saaran yaha bandow ay Dowladda Federaalka horey ugu soo rogtay.
Waxaa weeraro lagu hayey maalmahana saldhigyada ciidanka Booliiska ee Magaalada Muqdisho, sidoo kale waxay weeraradii ugu xooganaa ka dhaceen agagaarka Warshadda Baastada iyo SOS oo ay degan yihiin ciidamada Itoobiya iyo Federaalka.
Dadka ku dhaawacma Weerarada habeenkii ayaa intooda badan waxay u dhintan Dhiig bax, maadaama aan habeenkii dadkaasi la gaarsiin Karin goobaha caafimaadka, waxayna dadku dhaawacooda ku haystaan guryahooda.
Kulan ay shalay isugu yimaadeen Golaha Midnimada Beelaha Hawiye ayaa waxaa si weyn looga dooday hadalkii ka soo yeeray Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi ee ahaa in la sameyn doono Aag Cagaaran oo ay Dowladdu ku hawlgali doono iyo waliba safaaradaha shisheeye, waxayna Odoyaasha Beelaha Hawiye ku tilmaameen hadalkaasi in uu yahay mid Bulshada sii kala fogeynay.
�Intii Bulshada la isku soo dhaweyn lahaa ayay haatan Dowladdu bilowday in ay sii kala qaybiso� ayay yiraahdeen Odoyaasha Beelaha Hawiye oo sheegay in fikrada ka soo yeertay Cali Max�ed Geedi ay tahay mid ka timid dala shisheeye.
�Shacabka Soomaaliyeed uma baahna kala qoqob iyo kala qaybin, ee waxay u baahan tahay dad isku soo jiida oo ka shaqeeya nabadooda� ayay hadalkooda sii daba dhigeen Odoyaasha Beelaha Hawiye.
Marka laga fiiriyo Soonka Cagaaran ee dalka Ciraaq ma ahan mid laga gaaray hadafkii laga lahaa, waayo waxaa Habeen walba lagu weeraraa Hoobiyayal, xita waxaa dhacday in Qarax uu ka dhacay Xarunta Baarlamaanka ee uu soonkaasi ku yaalo.
Cali Geedi “DFKMG waxay sameyneysaa khad cagaaran”
Maalintii shalay ahayd ayaa wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed u ambabaxeen wadanka Kenya gaar ahaan Magaalada Nayroobi.
Intii uusan Madaxweynaha iyo wafdigiisa ka ambabixin Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa si aad ah loo adkeeyey ammaanka wadooyinkii uu marayey Madxweynuhu, waxaana la soo dhoobay ciidamo isugu jiray Ciidamada Itoobiya, kuwa Uganda iyo kuwa Dowladda Federaalka.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ayaa martiqaad ka helay safaaradda Mareykanku ku leeyahay Magaalada Nayroobi, inkastoo aan la faahfaahin safarka Madxweynaha, haddan warar ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha loogu yeeray arrimo la xiriira xaaladda nabadgelyo ee wadanka Soomaaliya oo maalmahan cirka isku shareertay.
C/llaahi Yuusuf ayaa inta uu joogo dalka Nayroobi waxaa lagu wadaa in uu kulamo la qaato saraakiil sarsare oo ka tirsan Dowladda Mareykanka.
18-ka Bishan ayaa Xulka qaranka Soomaaliyeed ee 17-jirada waxay kulan adag la yeelan doonaan xulka wadanka Rwanda, waxayna cayaartaasi dhaceysaa Saacaddu markay tahay 2:00 duhurnimo ee waqtiga Muqdisho.
Xulka oo haatan ku sugan Magaalada Kampala ayaa waxa uu Weriyaheena Faarax Max�ed Cali (Blue) noo soo sheegay in habeenkii xalay ay ka ambabaxeen xulku Magaalada Kampala, isagoo sheegay in cayaarta labaad ay 20-ka bishan la yeelan doonaan xulka wadanka Burundi, cayaarta sadexaadna waxay 22-ka Bishan la yeelan doonaan xulka wadanka Tanzania, wixii natiijo ah ee ku soo kordha tartankaasi waan idinla socod siindoonaa hadii uu Alle idmo.